नयाँ व्यवस्था अनुसार महिला लघुवित्तको आईपीओको रिजल्ट कसरी हेर्ने ? – BikashNews
२०७७ फागुन १४ गते १२:५० विकासन्युज
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियारिङ्ग(सीडीएससी)को नयाँ व्यवस्था अनुसार लगानीकर्ताले तीन वटा निकायबाट मात्रै आईपीओ रिजल्ट हेर्न पाउने छन् । सीडीएससीले आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीको वेबसाइट, बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइट र सिडीएससीको मेरो सेयर मार्फत मात्र आईपीओको रिजल्ट हेर्न पाउने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
जुन आज बाँडफाँड भएको महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ रिजल्टमा पनि लागू भएको छ । यससँगै उक्त संस्थाको सेयरमा आवेदन दिने आवेदकले आईपीओ रिजल्ट ‘मेरो सेयर’, महिला लघुवित्तको वेवसाइट र बिक्री प्रबन्धक एसबिआई मर्चेन्टको वेवसाइटबाट हर्ने सकिन्छ ।
महिला लघुवित्तकाे आईपीओ तलका यी तीन वटामा लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ
सिडीएससीको मेरो सेयर
बिक्री प्रबन्धक एसबिआई मर्चेन्टको वेवसाइट
महिला लघुवित्तको वेवसाइट
यसअघि विभिन्न वेबसाइटहरुले आईपीओको रिजल्ट सार्वजनिक गर्दै आएकोले सिडिएस एण्ड क्यिरिङ (सीडीएससी) ले अबदेखि त्यस्ता वेबसाइटलाई आईपीओ रिजल्ट प्रकाशित गर्नमा रोक लगाएको हो । अहिलेसम्म आईपीओ जारी हुँदाको समयमा इस्यू म्यानेजरले आईपीओ भर्ने सबैको डिम्याट खाता नम्बर अनधिकृत वेबसाइटहरुलाई दिँदै आएका थिए ।
महिला लघुवित्तकाे आईपीओ बाँडफाँड आज(फागुन १४ गते) सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्गको केन्द्रिय कार्यालय हात्तिसारमा सम्पन्न भएको हो । मर्चेन्टका अनुसार आईपीओमा आवेदन दिने आवेदकमध्ये ३७ हजार ५०० जनाले संस्थाको सेयर हात पारेका छन् भने बाँकीको हात खाली भएको छ ।
भाग्यमानी ३७ हजार ५०० जनाले मात्रै पाए महिला लघुवित्तको सेयर
उक्त आईपीओमा १५ लाख ४० हजार ३५ जनाले कूल २ करोड ३७ लाख ४७ हजार ५९० कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये १५ लाख ३६ हजार ६८२ जनाले दिएको कूल २ करोड ३६ लाख ९२ हजार ६३० कित्ता सेयरको लागि दिएको आवेदन योग्य भएको छ । भने बाँकी ३ हजार ३५३ जनाले माग गरेको कूल ५४ हजार ९६० कित्ता आवेदन भने रद्ध भएको क्यापिटलले जनाएको छ ।
रितपूर्वक आवेदन दिएकामध्ये ३७ हजार ५०० जनाले १० कित्ताको दरले सेयर हात पारेका छन् । उनीहरुलाई १०/१० कित्ताको दरले ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । त्यस्तै, बाँकी १४ लाख ९९ हजार १८२ जना आवेदकले भने लघुवित्तको सेयर हात खाली भएकाे छ ।
10 comments on "नयाँ व्यवस्था अनुसार महिला लघुवित्तको आईपीओको रिजल्ट कसरी हेर्ने ?"
Uttam basnet says:
Ipo of mahila laghubitta company limited
Krishana Shreshta says:
Pitamber Timilsena says:
Kasiram Panthi says:
Saraswati basnet says:
Rajandra Mishra says:
RamKumar Khadka says:
बिकास न्युजले कुनै पनि सर्वसाधारणको अधिकारलाई हनन गर्न पुर्ण प्रसाद आचार्यले अभिप्रेरित गरेको छ।अब निजको हातबाट गुगल पुरस्कार थाप्न जानू बिकास न्युज टिम।हिजडे कि जमात साले!!